Madi – Nepaliko Aawaj
अजित अधिकारी चितवन । माडी नगरपालिका ७ स्थित देबेन्द्रपुर निवासी ४७ वर्षिय मिना सुबेदी नियाले बाघको आक्रमणमबाट सामान्य घाइते भएकी छन् । आफ्नै घर पछाडि रहेको बारी बुलबुले भन्ने ठाउँमा घाँस काट्न जाँदा सुबेदीलाई एक्कासि नियाले बाघले आक्रमण गरेको हो । सुबेदीलाई दिउँसो २ बजेको समयमा बाघले आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शी गंगा सुवेदीले नेपालीको आवाज डटकमसंग बताइन् । घाइते सुबेदीको नि...
अजित अधिकारी चितवन । माडीमा नेकपा एकीकृत (समाजवादी) द्वारा सबै तहको संगठन निर्माण गरेको छ । जसअनुरुप युवा संगठनको माडी नगर अध्यक्षमा डिल्लीराम महतो चयन भएका छन् । बसन्तपुर बजारस्थित होटल प्याराडाइजमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको नगर माडी कमिटी घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुको तर्फबाट बघौंडा गाउँ निवासी युवा अगुवा महतोलाई माडी नगर कमिटीको अध्यक्षमा चयन गरेक...
अजित अधिकारी चितवन । माडीको चर्चित धार्मिक क्षेत्र सोमेश्वर गढीमा शनिबार प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवन माडी नगर कमिटीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संचारसंगै समृद्ध माडी निर्माणमा संचारकर्मीको भुमिका विषयकमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित राजनीतिक ब्यक्तित्व र जिल्लास्तरका पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो । खासगरी कार्यक्रममा ...
चितवन । अयोध्यापुरी ट्याक्टर ब्यबसायी समिति माडी ७,८,९ द्वारा माडी नगरपालिका ८ जीबनपुरका ट्याक्टर ब्यबसायी ईश्वर न्यौपानेलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । केही दिन अगाडि न्यौपानेको सवारीसाधन ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको थियो । देबेन्द्रपुरबाट जीबनपुर जाँदैगर्दा परुई खोलाको किनार नजिकै ना.५त. ८२१४ नम्बरको ट्याक्टर अनियन्त्रित भइ दुर्घटना हुँदा सोही ट्याक्टरमा सवार ३० वर्षिय सुनिल म...
चितवन । माडीमा मितेरी, कोशिश र युथ सोसाइटी तथा युएन वमेनको आर्थिक सहयोगमा परुई खोलाको किनारमा बसोबास गर्ने चेपाङ्ग समुदायलाई मानसिक स्वास्थ्य र मनो सामाजिक सु स्वास्थ्य बारे सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ । खासगरी बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ र यसले समाजलाई पारेको असर जसबाट समाजमा बसोबास गर्ने नागरिकले भोग्नुपरेको पिडा यसबाट सिर्जित हुने समस्या र यसको निराकरणका विषयकमा व...
चितवन । दशैंपछि परेको लगातार झरीले किसानले लगाएको धानबाली सखाप पारेको छ । यस अगाडि अविरल बर्षा र हावाका कारण किसानहरु धान काट्नबाट बन्चित भएका थिए । कता समयमा नै पाकेको धान काट्न नपाइने त होइन ? भन्ने समस्याले पिरोलिएपछि, अतालिएर पाकेको धान काट्न बाध्य भयौ । धान काटेको केही दिन नहुँदै आकाशबाट लगातार पानी पर्यो । निल समयमा नै उठाउन सकिएन जसले गर्दा धानबालीमा असर पुगेको मा...
अजित अधिकारी चितवन । माडीमा आइडिया फर नेपालद्वारा संचालित बृहत खेती अहिले सबैका लागि आकर्षण बनेको छ । एन.आर.एण्ड पार्टनर्सको ब्यबस्थापन र लगानी साथै माडी नगरपालिकाको सहकार्यमा संचालित उक्त बृहत खेती सबैका लागि थप आकर्षण बन्दै गएको हो । सुरुवाती चरणमा फलफूल खेती गरिने भनेर अबधारणा बनाइएको थियो । तर लकडाउनका कारण भारत, इटली लगाएतका देशबाट ल्याउने भनिएका विभिन्न उन्नत जातका...
चितवन । माडीमा शान्ति आमा समूह बरुवाद्वारा बाबुआमा गुमाएका छोराछोरीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । रोगबाट प्रताडित बनेका माडी -१ निवासी मायाराम महतोलाई उपचारको लागी गाउँबाट उठेको रू १८ हजार १ सय ३० रुपैयाँ र जितिया तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम २०७८ बरुवाबाट बचेको रू ५ हजार गरी जम्मा रू २३ हजार १ सय ३० रुपैयाँ रकम उठेको थियो । सो रकम संकलन भएको भोलिपल्ट नै बिरामी बाबु मायाराम...
बोन म्यारो पिडित माडीका युनिक ढकाललाई बेल्जियमका पौडेलले गरे आर्थिक सहयोग
चितवन । बोन म्यारो समस्याबाट पिडित रहेका माडीका युनिक ढकालको उपचारको लागि बेल्जियममा रहेका बिष्णु पौडेलले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । माडी नगरपालिका ७ स्थित देबेन्द्रपुर शनि मन्दिर टोल निवासी यम बहादुर ढकालका छोरा युनिक ढकालको उपचारको लागि बेल्जियममा रहेका माडी ७ देबेन्द्रपुरका बिष्णु पौडेलले आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । युनिक बिगत लामो समयदेखि रगत सम्बन्धि बोन म्यारो समस्...
शनिबार, भाद्र १२, २०७८